Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Canary Island of La Palma dia faritra voajanahary ankehitriny » Page 2
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Septambra 28, 2021
Manahy ny manam-pahaizana fa ny lava avy amin'ilay volkano dia mety hamorona etona misy asidra hydrochloric misy poizina raha mahatratra ny ranomasina. Raha nihena ny iray amin'ireo renirano lava roa, ny iray hafa kosa dia nahavita hafainganam-pandeha. Ny tatitra tamin'ny talata dia nanolo-kevitra ny iray ho 800 metatra miala ny ranomasina.
Efa an-andro maro no nandrasan'ny tompon'andraikitra fa hahatratra ny ranomasina ny lava, saingy ny hetsika volkano dia tsy mandeha amin'ny laoniny, somary mampiadana ny fizotran'ny renirano mafana. Na izany aza, ny hetsika dia nidina indray alina, nampitombo ny ahiahy.
Raha an'arivony maro no nafindra toerana, maro no mijanona ao ambany tanàna amoron-dranomasina noho ny fiandrasana ny fantson-dronono tonga hatrany amin'ny Oseana Atlantika. Vohitra telo no nohidiana ny alatsinainy teo teo am-piandrasana, ary nilazan'ny mponina ny hanidiana varavarankely ary hijanona ao an-trano.
Hatreto dia mbola tsy nisy ny aina nafoy na naratra mafy nanomboka tamin'ny nanombohan'ny fipoahana.